आर्ट फिल्मका ‘एङग्री योङ म्यान’ ओम पुरी
Sat, Apr 21, 2018 | 03:37:32 NST
12:57 PM ( 1 year ago )
प्रकाश सायमी –
ओझेल परेका ओम पुरीसँगका स्मृतिहरु ताजा भएको छ । आज बिहान पुरीको निधन भएको खबरले उहाँसँग जोडिएका स्मृति हावाको झोका बनेर ठोक्किन आएका छन् । अनि यतै घुमिरहेका छन् ।
सन् १९८० को दशकमा भारतमा समानान्तर सिनेमाको आन्दोलन चल्यो । यसका प्रमुख पात्रमध्येका एक हुन् अभिनेता–ओम पुरी । भारतमा समानान्तर सिनेमाको आन्दोलनले धेरै आर्ट चलचित्र बन्ने क्रम सुरु भयो । उता समानान्तर चलचित्र बन्ने । त्यसको प्रभाव यता नेपालमा रहेका चलचित्र तथा साहित्यमा रुची राख्ने हामीहरुमा पनि परेको थियो । असीकै दशकमा हामीले ओम पुरीका आक्रोश, अर्ध सत्य, गोधुली सहितका चलचित्र काठमाडौंको ओटु टोलमा रहेको भिडियो लाइबेरीमा हेरेका थियौं ।
अशेष मल्ल, बद्री अधिकारी, सरुभक्त, सपना मल्ल, हरिहर शर्मासहितका हामी धेरैले पुरीका चलचित्र हेरेका थियौं । हरिहर शर्माले त आफूमा ओम पुरीको अभिनयको प्रभाव नै परेको बताउनुभयो ।
अर्ध सत्यका लागि पुरीले कालोभारी फिल्म फेस्टिबलमा सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्कार पाउनुभयो । त्यसपछि उहाँलाई विश्वले नै राम्रो अभिनेताको रुपमा चिन्यो । उहाँको कामको प्रशंसा निकै भयो ।
पुरी राम्रो अभिनेता मात्रै होइन, त्यो भन्दा राम्रो मानव पनि हो । उहाँले हामीलाई सुनाएको एउटा घटनाले निकै प्रभाव पारेको थियो । उत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्कार लिनका लागि कालाभारी फिल्म फेस्टिबल जाने विमानस्थल जाँदै गर्दा उहाँलाई बाटोमा काईंयो बेच्ने युवकले एउटा काईंयो दिएको र आफूले त्यसलाई पनि ठूलो पुरस्कारको रुपमा लिएको सुनाउनुभयो ।
कलाको सम्मानमा पनि उहाँको स्वभाव निकै खरो थियो । वि.सं. २०४२ मा एक कार्यक्रममा अतिथि भएर पुरी नेपाल आउनुभएको थियो । प्रज्ञा भवनको रंगमञ्चमा भएको कार्यक्रममा उद्घोषण गरिरहेका निर्देशक प्रकाश थापाले उहाँलाई मञ्चमा बोल्न बोलाउनु भयो । त्यही क्रममा थापाले उहाँलाई अभिनय गरेर देखाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
तर त्यसको जवाफमा पुरीले भन्नुभयो – ‘जसरी काठमाडौंको बिच सडकमा तपाईं कुनै डाक्टरलाई शल्यक्रिया गर भन्न सक्नु हुन्न, जसरी कुनै कोठा भित्र कुनै पाइलटलाई विमान उडाउन भन्न सक्नु हुन्न, त्यसैगरी अभिनयका लागि पनि ठाउँ चाहिन्छ । यसरी कुनै पनि बेला अभिनय गर भन्नु र गर्नु कलाकै अपमान हो ।’ उहाँको यो भनाईले मलाई निकै प्रभावित बनायो । उहाँ प्रष्ट वक्ता । प्रष्ट रुपमा आफ्नो कुरा भन्नुभयो ।
पछि फिल्म पढ्न बम्बई जाँदा उहाँसँग भेट भयो । थप नजिक हुने मौका मिल्यो । मैले उहाँको नाट्य समूह मजमामा केही वर्ष नेपथ्यको सहयोगी भएर काम गरेँ । उहाँसँग मेरो हिन्दी फिल्मको डबिङको क्रममा भेट भएको थियो । हामी भोकै थियौं । उहाँले चाल पाउनुभएछ ।
भित्रैबाट आफूलाई खाजा मगाए जस्तो गर्नुभयो । तर उहाँले त हाम्रो लागि पो खाजा मगाउनुभएको रहेछ । खाजा खान भन्दै उहाँले ‘मलाई थाहा छ, तिमीहरुले केही खाएका छैनौ, मैले पनि भोगेको छु यस्तो दुःख’ भन्नुभयो । यसपछि हामी झन नजिक भयौं ।
त्यसको केही समयपछि हामी उहाँलाई भेट्न उहाँकै फ्ल्याटमा गएका थियौं । उहाँको घरमा काम गर्ने नेपाली थिए–हरि नाम गरेका स्याङजाका युवा अनि हिमालको तस्बिर । हरिसँग उहाँको सम्बन्ध साथीको जस्तै थियो । चलचित्रमा जस्तै उहाँ वास्तविक जीवनमा पनि सबैलाई आदर गर्ने स्वभावको मानिस हो ।
आर्ट फिल्मका ‘एङग्री योङ म्यान’ को रुपमा परिचित ओम पुरी पछि विस २०५२ सालमा नेपाली हिन्दी चलचित्र साङ्ग्रिलामा अभिनय गर्न नेपाल आउनुभयो । चन्द्रप्रकाश दुवेको निदेर्शनमा बनेको चलचित्रमा म सहायक निदेर्शकको भूमिकामा थिएँ ।
यो बेला अभिनयप्रतिको उहाँको लगावले निकै प्रभावित बनायो । भरियाको भूमिकामा रहनुभएका उहाँ बसेकै होटलबाट मेकअप गरेर आउनुहुन्थ्यो । निर शाह, सरोज खनाल, चन्दा श्रेष्ठ, सुधान्शु जोशीसहितका नेपाली कलाकारको पनि यो चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।
सुटिङकै क्रममा एकदिन उहाँसँग अभिनय गर्ने नेपाली कलाकार आइनन् ।
उहाँले किन नआएको भनेर सोध्नुभयो । उहाँको अर्को पनि काम छ भन्यौं । उहाँले यहाँ कलाकारिता गरेर मात्रै जीवन चलाउन पुग्दैन र ? भन्नुभयो । उहाँले त्यो प्रश्न गरेको २१ वर्षपछि पनि हामी उही अवस्थामा छौं । बिहानै उहाँको निधनको खबरले त्यो प्रश्न पनि ताजा बनाएको छ ।
(साहित्यकार प्रकाश सायमीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)